Baarlamanka oo maanta ka dooday siyaasadda arrimaha dibadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka arrimaha dibadda Sweden Margot Wallström oo maanta ka hor qudbaynaysay baarlamaanka dalka. Foto: TT
Baarlamanka oo maanta ka dooday siyaasadda arrimaha dibadda
Wallström:siyaasad arrimaha dibadeed oo ku salaysan xaquuqda dumarka
La daabacay onsdag 11 februari 2015 kl 13.57
Maanta wasiirka arrimaha dibadda ayaa markii ugu horeysey tan iyo markay noqotay wasiiradda arrimaha dibadda ka horjeedisey baarlamaanka qodbad ku sabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Sweden.
Qobadda wasiiradda arrimaha dibadda Margot Wallström waxbaaha ay ku soo qaadatay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga, gaar ahaan gardareysiga Rushka ku hayo dalak Ukrain, dagaalka sokeeya ee ka taagan dalka Suuriya iyo qaxootiga ka soo caraya halkaas iyo weliba xasuuqa iyo isbaahinta kooxda argagaxisada ah ee ISIS. Lakiin wasiiradda ayaa si gooni u xustay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Sweden ay ku saleysnaan dooonto u halganka xaquuqda dumarka.
– Muddane afhayeen, waxaa imminka habaysmaya siyaasad arrime dibadeed oo ku dhisan u halganka xaquuqda dumarka, hadefkeedana yahay ka hortaga takooridda dumarka, hagaajinta sharuudaha ay dumarka ku noolyahiin iyo in aan gacan ka geysano nabadda iyo horumarka. Waxaan adkeyneynaa kaalinta dumarka ee ah ka qaybgalka awoodda, hadey ahaan la heyd waddamada nabadda ah ama kuwa rabshada ka soo kabanaya, ayey trir wasiiradda arrimaha dibadda Margot Wallström.
Wasiiradda ayaa qodbadeeda ku sheegtay in dowladda ay ahmiyadda saartay adkeynta xiriirrka iyo wadoshaqeynta ay la leedahay qaramada midoobey iyada oo Sweden ka qayb qaadaneyso howlgalo ciidan sida howlgalka ciidan ee Qaramada Midoobay ka waddo dalka Mali. Wasiiradda ayaa sidoo kale sheegtay in Sweden u tartamayso ka mid noqoshada golaha amaanka ee Qaramada Midoobay. Laakiin mucaaradka ayaa middas saluugay iyaga oo farta ku fiiqay dhibaatada ka taagan Yurub, gaar haan xaaladda ka taagan Ukraa’iin. Mucaraadka ayaa ku dooday ahmiyadda ay Sweden saarayso QM in ay hoos u dhigeyso kaalinta Sweden ee EU.
Karin Enström, oo moderaterna u ah afhayeenka arrimaha dibadda horeyn u aheyd wasiirka difaaca ayaa baarlamaanka ka hor sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda ay ahaan doonto mid aan ahmiyadeysaneyn.
– Xukumaddii Alliansen siyaasadeeda arrimaha dibadda waxay ku socotay dhabo cad oo ah in dadaalka la geliyo deegaanada nagu dhow. Laakiin tan iyo markii xukumaddan qabatay awooda waxa qabaa in muujisey siyaasad arrimo dibadeed oo aan ahmiyadeysaneyn. Siyaasad arrimo dibadeed oo kalo firarsan oo qatar gelin kara daciifin karana kaalinta Sweden ku leedahay EU, taas oo ugu danbeyn hoos u dhigi karta codka iyo kaalinta guud ahaan EU.
Laakiin Margot Wallström ayaa dhaleeceynta mucaaradka ka jawaabtay tilmaantayna in ahmiyadda Sweden siineyso QM aysan meesha ka sareynin kaalinta Sweden ee EU.
– Enström Waxay ka welwlesan tahay in xukumadda ahmiyadda saarto QM oo ay u heysato in ay u dhimayso dadaalkeena. Laakiin waxaan xasuusinayaa in QM iyo EU yahiin wax isku mid ah. Waxii maanta caalamka ka dhacaya Sweden saameyn ayey ku yeelaneysaa, xataa degmooyinka dalkeena ayey saameyn ku yeelaneysaa. Marka sidaas darteed waxaan rajeynayaa in ruuxa doonaya in uu arko EU xoog leh in uusan hilmaamin saameynta ay waxyaabah caalamka ka dhacaya ku leedahay xataa degmooyinka dalkeena, ayey ugu jawaabtay.
Sacuudi Carabiya iyo xaquuqda dumarka
Dhanka kale xisbiyada kalo ah Vänsterpartiet iyo folkpartiet ayaa ayagana farta ku fiiqay sida isku geli karto siyaasadda arrimaha dibadda ee ku salaysan u halganka xaquuqda dumarka iyada oo Sweden kula jirto heshiis militari oo xasaasi ah dalka Sacuudi Carabiya, heshiiskas oo ay imminka dib u eegis ku socoto. Afhayeenka arrimaha dibadda ee Vänsterpartiet ayaa shaki ka muujiyey in xukumadda horumood u noqon karto siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan feminism ama u halgan xaquuqda dumarka iyada oo ay weliba xukumaddan la laadahay wadoshaqey dhow dalka Sacuudi Carabiya.
– Heshiis wadoshaqeyn militeri oo lalagalo waddanka aduunka ugu cadaadis badan haweenka oo si nidaameysan meel uga dhaca xaquuda dumarka. Ma ahan keliya gudaha waddankas balse waxay hoos ka taageeraan dowladda islaamiga ah argagaxa ay ka waddo bariga dhaxe, waxaana si markasta aragnaa sida joogatada ah ee ay Sacuudi Carabiya ugu hortagto waxay kastoo Margot Wallström maanta halkan ka sheegtay.
Margot Wallström ayaa ku weerartay xisbiga Folkpatiet in ay muddo sideed sanno ah ka mid ahaayeen xukumadiid hore ayna heysteen fursad ay ku soo gabangabeyn kareen heshiiskan wadoshaweyn ee Sacuudi Carabiya. Sidoo kale waxay carabka ku adkeysay in wasaaradda arrimaha dibadda ay imminka ku howlan tahay qorsheynta sida ay wasaaradda ugu howlagli karto siyaasad arrimo dibadeed oo ku salaysan u halkan xaquuqda dumarka. Dhanka kalena waxay tilmaamtay heshiiska wadoshaeynta militeri ee Sacuudi Carabiya hadda baaritaan lagu hayo.
– Dabcan waa wax cad in siyaasadda Sacuudi Carabiya ay ka fogtahay siyaasad ku dhisan xaquuq dumar, waana sax in aysan aheyn wax fiican in aan hub u dhoofino waddankas. Laakiin sidaa ka warqabtiinba waxaa socda baaritan arrinkan la xiriira oo talaayin ka keeni doona gu’ga, waxaan horey sidoo kale u sheegnay in aan dib u eegis ku sameyn doono hesiishka wadoshaqeyn ee la leenahay Sacuudi Carabiya taas oo hadda shaqadeeda socoto.